N-C-A Inoti Zanu PF neM-D-C Vanofanirwa Kupinda Muvanhu Vasati Vaumba Bumbiro Idzva Remitemo Yenyika
Gumiguru 19, 2007
NeChina Studio 7 yakaburitsa nyaya yekuti vari kumirira Zanu PF ne M-D-C munhaurirano pakati pemapato aya, vakawirirana kuti panyorwe bumbiro idzva remitemo.
Vamiriri ava, avo vanoti, gurukota rezvemitemo, VaPatrick Chinamasa, negurukota rezvevashandi nekugara kwakanaka kwevanhu, VaNicholas Goche vekuZanu PF pamwe nevanyori vakuru muzvikwata zviviri zveMDC, VaWelshman Ncube naVaTendai Biti.
Zvakawiriranwa nevarume ava zvichapirwa kumapato avo kuti azeye zvibvumirano izvi kana zvichikodzera kutambirwa. Sangano rinorwira kuti munyika muve nebumbiro idzva remitemo yenyika, reNational Constitutional Assembly, N-C-A, rinoti kana Zanu PF neM-D-C vakawirirana kuti panyorwe bumbiro remitemo idzva, bumbiro remitemo iri rinofanirwa kubva muvanhu.
N-C-A inoti haisi kungorwira kuti kuitwe bumbiro remitemo idzva chete, asi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvive izvo zvinoumba bumbiro iri, kwete kuti zvitwe chete mapato ezvematongerwo enyika.
Izvi zvinotevera mashoko ekuti vari kumirira Zanu PF neM-D-C muhurukuro dziri kutungamirwa nemutungamiri weSouth Africa, VaThabo Mbeki, vakasangana mukupera kwaGunyana muchikepe kuKariba, uko vakawirirana kuti panyorwe bumbiro remitemo idzva.
Mashoko anoti bumbiro remitemo iri richaumbwa nezvichatorwa kubva kune bumbiro remitemo rakanga ranyorwa nehurumende muna2000, rakanga ranyorwa neN-C-A uye rakanyorwa neZanu PF pamwe neM-D-C muna 2003/2004.
Mutauriri weN-C-A, VaMaddock Chivasa, vaudza Jonga Kandemiiri weStudio 7 kuti kana pasina zvinobva muvanhu, sangano ravo richaramba zvakare bumbiro remitemo iri sezvavakaita muna 2000.